WordPress 3.3 Inosvika | Martech Zone
Chipiri, Zvita 13, 2011 Chipiri, Zvita 13, 2011 Douglas Karr
WordPress 3.3 asvika! Iyo yekushandisa interface usability iko kugadzirisa. Kana WordPress yakavhura iyo menyu, zvaiita sekunge wese mugadziri wePlagi kunze uko akasarudza kugadzira menyu nyowani. Izvi zvakaita kuti menyu sisitimu muWordPress ishore zvakanyanya. Iyo nyowani mbeva yepamusoro dhizaini menyu inoita kuti zvive nyore kwazvo kupururudza nepakati uye uwane zvaunoda. Iyo Administrative interface ikozvino inoshanda nemazvo pamahwendefa zvakare.
Chimwe chinhu chinonakidza chakawedzerwa kune iyo API ndiko kugona ku pinda iyo WordPress mameseji edhita. Izvi zvinovhura iwo mukana kune vanogadzira kuti vabatanidze yavo yega manejimendi mapeji pamwe nevapepeti. Mupepeti pachawo wakagadziridzwa kuti ubatanidze kudhonza uye kudonhedza interface, ichibvumira kuti akawanda mafaera adonhedzwe mukati!
Zvinotaridza sekukura kwe Tumblr irikudzorawo mimwe misoro kuWordPress… iyo Tumblr importer ikozvino yave kurarama :). WordPress yakatumira runyorwa rwese mvandudzo mu WordPress 3.3 pane yayo saiti.